japan နိုင် ငံ​မှာ အလုပ် လာ​လုပ် ချင် လို့​ပါ
japan နိုင် ငံ​မှာ အလုပ် လာ​လုပ် ချင် လို့​ပါ​ဗျ။ အင် တာ​ဗျူး​အောင် ပြီး​ပါ​ပြီ။ wp နဲ့​ပါ။ အကို​အမ တို့​ရင် ဆိုင် ခဲ့​ရ​တဲ့​အခက် အခဲ တချို့​ပြော​ပြ ပေး​ပါ​လား​ဗျ။ ကြိုတင် ပြင် ဆင် ထား​ချင် လို့​ပါ။ အားလုံး​အဆင် ပြေ ပါ စေ။
Question by Kyaw Myo Hlaing
ဂျပန် မှာ လူ​ခံ​ရှိ​ယင် အလည်​လာ​ဘို့ လွယ်​တယ်။ ဘာ​ကြောင့်​လွယ်​သလဲ​ဆို​ယင်၊ ဂျပန်​ကို​လာ​လည်​မဲ့​သူ​ဟာ သူ​နဲ့ ပတ်သက်​သူ ဂျပန်​မှာ ရှိ​တာ​တစ်​ချက်၊ တစ်​စုံ​တစ်​ရာ​အတွက် ဂျပန်​မှာ နေ​သူ​က အာမခံ​ချက် တ​ခု​ခု လုပ်​ပေး​ထား​ရ​တဲ့ အတွက်၊ အဲ​ဒီ​ဥပဒေ​က အရင် သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ မြန်မာ​နိုင်ငံ​စာအုပ်​သမား​တွေ​အပေါ်၊ အခု​လက်​ရှိ လျော့​ပေး​လား၊ ပို​တင်း​ကျပ် လာ​လား​ကိုယ်​လည်း​မ​သိ​ဘူး၊ အခြား​တိုင်း​ပြည်​က​သူ​တွေ အတွက်​ကတော့ မြန်မာ​ပြည်​လောက် မ​တင်း​ကျပ်​ဘူး။နောက်​တ​ခု​က ဂျပန် နိုင်ငံသား​ခံယူ​ထား​တဲ့​သူမ​ဟုတ်​တဲ့​ဂျပန်​နိုင်ငံ​မှာ အမြဲ​တမ်း​နေထ်ိုင်​ခွင့်​ရ​ရှိ​ထား​ပြီး သူ့​နိုင်ငံ​ဥပဒေ​နဲ့ အညီ​နေထိုင်​တဲ့​သူ​ရှိ​ယင်​လည်း ရ​တယ်။ သူ့​နိုင်ငံ​ဥပဒေ နဲ့ အညီ​နေထိုင်​တယ်​ဆို​တဲ့ စကား​က တည်​ငြိမ်​တဲ့​အလုပ်အကိုင်​တ​ခု​ရှိ​ရ​မယ်။ ဝင်ငွေ​ခွန်​တို့၊ နေထိုင်​ခွန်​တို့​တွေ ပေး​ဆောင်​ထား​တဲ့​သူ​ဖြစ်​ရ​မယ်။ အများ​ကြီး​ပြော​လည်း မြန်မာ​ပြည်​က သူ​တွေ အနေ​နဲ့ နား​ရှုပ်​တာ​ပဲ အဖတ်တင်​မှာ​စိုး​လို့ လို​အပ်​မယ်​ထင်​တာ​လောက်​ရွေး​ပြော​တာ။ဒီ​လောက်​ဆို နားလည်​ကြ​မယ်​ထင်​ပါ​တယ်။ တ​ခု အရေးကြီး​တာ​သတိပေး​မယ်။ အသိမိတ်ဆွေ မ​ရှိ ပဲ လာ​ချင်​တဲ့​သူ​တွေ​အဓိက​ပြော​ချင်​တာ​က ကျောင်း​နဲ့ ပို့​ပေး​မယ်။ ကျောင်း​ဗီဇာ​သေချာ​တယ်​ဆို​တာ ရှိ​တယ်၊အလုပ်​လည်း​ရှာ​ပေး​မယ်​ဆို​တာ ဟုတ်​တယ် ရှိ​တယ်၊ တစ်​လ​ကို သိန်း​နှစ်​ဆယ်​လောက် - ဆယ့်​ငါး​သိန်း​လောက်​အသား​တင်​ကျန်​မယ်​လို့ အာမခံ​မယ်။ မ​ရ​တဲ့⁠တဲ့​လ​ကို စိုက်​ပေး​ပါ့​မယ်​ဆို​ယင်​လာ​သာ​လာ​ခဲ့​ကြ။ ဘာ​လို့​လည်း​ဆို​တော့ ကျောင်း​လခ​ဟာ တစ်​နှစ်​ကို မြန်မာ​ငွေ သိန်း​ရ​၀ အထက် နဲ့​အောက်​ကို နှစ်​တိုင်း​ပေး​သွင်း​ရ​မှာ ဖြစ်​လို့။နေ​စရိတ်​စားစရိတ်​မ​ပါ။ အခြား​သော​စရိတ်​များ​စွာ​ကို​တော့​ထည့်​မ​ရေး​ပါ​ဘူး။ ရ​မှာ​တွက်​ကျ သ​လို ကုန်​မှာ​ကို​လည်း ထည့်​တွက်​နိုင်​အောင် ပဲ​ထောက်​ပြတာ​ပါ။ အခြား​သူ​တွေ​လည်း​ဒီ​လို အခက်​အခဲ​တွေ ကြား​က ရပ်​တည်​နေ​ကြ​တာ​မို့ နောက် လာ​မဲ့ မျူ ိး​ဆက်​တွေ​လည်း အဲ​လို​ပဲ ကြိုးစား​ယင် ဖြစ်​သွား​ကြ​မှာ​ပါ။
Answer by မိမိ စာ​မျက်နှာ များ from FB
အများ​က လာ​ချင်​ဇော တွေ သိပ်​များ​နေ​တော့ အမှား​အမှန် မ​ချင့်ချိန် နိုင်​တော့​ဘူး​ဖြစ်​နေ​ကြ​တယ်။ လာ​ချင်​တဲ့​စိတ်​က ကိုယ့်ကိုယ်ကို လွှမ်းမိုး​ပြီး။သွား​ရ​ဘို့ မျှော်လင့်​ချက်​က ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်​နေ​ကြ​သ​လို​ဖြစ်​နေ​တယ်။ ထီ ဆို​တာ ထိုး​တိုင်း​တော့​မ​ပေါက်​ဘူး။ ထီ​ထိုး​ထား​ယင်​တော့ ပေါက်​မ​လား​လို့ စိတ်ကူး​ယင်​လို့ ရ​တယ်။ ဂျပန် လို နိုင်ငံ မ​ပြော​နဲ့ မလေးရှား​ကို အလည်​ဗီဇာ ယူ​ပြီး ခြောက်​လ တိုး​ပေး​လို့ ရ​နိုင်​လား အရင် သွေး​အေးအေး​နဲ့​စဉ်းစား​ကြ​စေ​ချင်​တယ်။ လာ​ချင်​တဲ့​ဇော​တွေ သိပ်​များ​နေ​တော့ တ​ချူ ိ​႔ မေးခွန်း​တွေ​က ရီ​စရာ​လို ဖြစ်​နေ​တယ်။ အကြံ​ပြု ချင်​တာ​က ဘယ်​နိုင်ငံ​ကို ပဲ သွား​ဘို့ လုပ်​လုပ် ပြည်​ပ​တိုင်း​ပြည်​တွေ​နဲ့ ပတ်သက်​မှု့​ကို တော့ ဝိ​ရိ​ယ စိုက် လေ့​လာ​ပါ။ အလွယ်​လမ်း​ကို လိုက်​ယင်​တော့​မှား​လိမ့်​မယ်။ သူ​များ​တိုင်း​ပြည်​ကို ထွက်​လာ​ဘို့ ဘာ​မှ တ​ခု​မှ မ​သိ​ပဲ လွယ်​လွယ်ကူ​ကူ မ​ဆုံးဖြတ်​ကြ​ပါ​နဲ့။ အဲ​လို​သာ​လွယ်​လွယ် လာ​လို့ သိန်း​သုံး​လေး​ငါး​ဆယ် ဆို မြန်မာ​ပြည် လူ​တောင်​ကျန်​မှာ မဟုတ်​သ​လို။ ဂျပန် ကျွန်း​လည်း လေး​လို့ ပင်လယ်​အောက်​ရောက်​ဘို့​ပဲ ရှိ​တော့​တယ်။ ကြုံ​လို့ တစ်​လက်စ​ထဲ​ပါ ရှင်း​ပြ​ချင်​တာ​တစ်​ခု​ရှိ​တယ်။ ကျောင်း​နဲ့​လာ​တယ်​ဆို​တာ​ကျောင်း​တက်​မယ် ဆို​ပြီး ကျောင်း​ဗီဇာ​ယူ​တာ​ပါ​ပဲ။ တစ်​ကယ်​က ပညာသင်​ယူ​ဘို့​ထက် အလုပ်​လုပ်​ချင်​တာ​ပါ။ ငွေ​ရှာ​ချင်​တာ ပထမ ပါ။ အဲ​ဒါ​ကို အကြောင်းပြ​ပြီး ကျောင်း​ဗီဇာ​နဲ့ အလုပ်​လုပ်​ကြ​တာ​ပါ။ဂျပန်​အစိုးရ​ဘက်​ကတော့ တရားဝင်​ဆို​တာ ရပ်​တည်​ရေး​အတွက် လူ​မှု့​ရေး​အရ ခွင့်​ပြု​တဲ့​အချိန်​ကို လုပ်​ရ​တာ​ပါ။အားလုံး​က ပင်လယ်​ရေ အတူတူ​သောက်​ကြ​တာ​မို့ ကူညီ​ကြ​တယ်။ စည်းကမ်း​မ​တင်း​ကျပ်​တဲ့ အလုပ်​တွေ​ဆို ကျောင်းသား​တွေ​လည်း​အလုပ်​ချိန် အကန့် အသန့် မ​ရှိ လုပ်​နိုင်​တယ်။ အဲ​လို အခွင့်အရေး​ရ​တဲ့​သူ ကံကောင်း​တဲ့​သူ ငွေ​ရှာ​လို့ ရ​တယ်။ ကျောင်းသား​တိုင်း​အစဉ်​ပြေ​တယ်​လို့​တော့​မ​ထင်​ပါ​နဲ့ ဒုက္ခရောက်​နေ​သူ​ယင်း​ကျောင်း​ဗီဇာ​ကုန်​တော့ ဘာ​ဆက်​လုပ်​ရ​မှန်း​မ​သိ​သူ​တွေ​လည်း အများ​ကြီး​ပါ။ အလုပ်​တွေ အများ​ကြီး​တရားဝင်​လုပ်​လို့​ရ​တယ်​တော့ မ​ထင်​နဲ့။ ကျောင်းသား​တွေ​ကို​ထုတ်ပေး​ထား​တဲ့ နိုင်ငံ​ခြား​သားID ကဒ်​မှာ ဗီဇာ အမျူ ိး​အစား၊ အလုပ်​လုပ်​ခွင့် ရှိ​မ​ရှိ ဆို​တာ ရေးထား​ပြီး​သား၊ ကိုယ်တိုင်​မြင်​ဘူး​တဲ့(ဒ​ဇိုင်း​နာ ဆေး​မွန်း ) တက်​နေ​တဲ့ ကျောင်းသား​ရဲ့ ဂိုင်း​ဂျင်း ကဒ်​ကို ယူ​ကြည့်​မိ​တယ်။ အလုပ်​လုပ်​ခွင့်​မ​ရှိ​ဆို​တာ​ကို ရေးထား​တယ်။နောက်​ကျော​ဖက်​မှာ​တော့ သတ်​မှတ်​နာရီ​ဘယ်​န​နာရီ​ကို ရေး​ပေး​ထာ​တယ်။အဲ​ဒါ​ဟာ နေ​စရိတ်​နဲ့ စားစရိတ် သုံး​လို့ ရ​တဲ့​အနေအထား​မှာ​ပဲ ရှိ​တယ်။ ပြော​ပြတာ​ပါ။ လူ​တိုင်း​ကတော့ အလုပ်​ရှင်​က​ကျေနပ်​ယင် ok ယင်​လုပ်​ကြ​တာ​ပဲ။ ဒါ​မှ ပြန်​ပို့ နိုင်​မှာ ဖြစ်​သ​လို လာ​စရိတ်​ပြန်​ရ​နိုင်​မှာ။ သိ​တာ​ကို​ပြော​ပြ​ယုံ​သက်သက်​ပါ။ ကျန်​တာ​မည်​သူမ​ဆို​လွတ်လပ်​စွာ ဆုံးဖြတ်​နိုင်​တယ်။ လာ​လို့​ရ​ယင် လာ​သာ​လာ။ဘယ်​ကိစ္စ​မ​ဆို လက်တွေ့​ကျ​မှ အတိ​အကျ​သိ​ရ​တာ။အခု​ကိစ္စ​ကို ရှင်း​ပြ​ချင်း သည် မည်​သူ့​ကို​မှ ကန့်ကွက်​လို​တဲ့ ဆန္ဒ မ​ပါ​ပါ။ အဖြစ်​မှန်​နဲ့ အခြေအနေ​ရဲ့ အမှန်​အတိုင်း တရားဝင်​တဲ့ လမ်းကြောင်း​အတိုင်း​ပြော​ပြ​ချင်း​ပါ။ တရားမ​ဝင်​တဲ့ နည်း​လမ်း​တွေ​နဲ့ ဒီ​လို​ပဲ လေး​သံ​လဲ နားထောင် ညောင်​သီး​လည်း​စား​လုပ်​ကြ​ရ​တာ​ပါ။
Written by မိမိ စာ​မျက်နှာ များ from FB
Answer by Kyaw Kyaw
ကောင်း⁠ကောင်း​မေး​ပြီး​စဉ်းစား​ပါWPဆို​တာ. သူ​တို့​ဆီ​မှာ​ဘဲ​လုပ်​ရ​မှာ​ပါ.တခြား​အလုပ်​တွေ​မ​ခန့်​ပါ. ရုံးထိုင်​အလုပ်​ဆို​ပါ​တော့​လေ။ အင်း ကောင်း⁠ကောင်း​မေး​ကြည့်ပါ​လို့​ဘဲ​ပြော​ပါ​ရ​စေ.ရောက်လာ​ရင်​ဘာ​အလုပ်​တဲ့​လည်း. မ​ယုံ​ရင်WPနဲ့​လာ​တဲ့​လူ​တွေ​ကို​မေး​ကြည့်​ပါဘော်ဘော်​ရေ.။ အလုပ်​ပေး​နိင်​လား​လို့. အပြော​တ​မျိုး​အလုပ်​တ​မျိုး​ဖြစ်လာ​ကြ​တာ​ပါ. မ​ယုံ​ရင်​မေး​ကြည့်ပါ. နံပါတ်​တစ်. သူ​တို့​ဆီ​မှာ​ဘဲ​လုပ်​ပေး​ရ​မယ်. အကြောင်း​စုံ​တွေးတော​မေးမြန်း​ပါ. ဘယ်​လို​တွေ​ဖြစ်​နေ​ကြ​တယ်​ဆို​တာ​ပေါ့​လေး။
Answer by Sanra Khing